Madaxweynaha Jubba oo beesha caalamka ka dalbaday in lagala shaqeeyo adeegyada bulshada – Radio Daljir
Oktoobar 8, 2013 4:54 b 0
Kismaayo, October 8, 2013 – Maamulka KMG ah ee Jubba ayaa? diyaarinaya qorshe dib loogu soo celinayo adeegyada bulshada muhiimka u ah ee gobollada maamulku ka taliyo, howshaas ayaa u baahan taageero dheeraad ah sida ay sheegeen madaxda Jubba.
Madaxweynaha Jubba Axmed Maxamed Islaam (Madoobe) oo shir jaraa?id ku qabtay Kismaayo ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah, waxaana uu ka dalbaday beesha caalamka in laga taageero maamulka dib u soo celinta adeegyada bulshada.
?Arrintan waxay muhiim u tahay bulshada gobolka iyo dadweynaha meel walba oo ay joogaan, waxaan dadaal u galaynaa si kasta oo lagu heli karo adeegyadaas.? Ayuu yiri Axmed Madoobe.
Docda kale waxaa uu madaxweyne Axamed Madoobe sheegay in dhowaan ay dhamaystiri doonaan hay?adaha kala duwan ee maamulka KMG ah ee Jubba, si loogu talaabsado shaqooyin dhowr ah oo maamulka horyaala.
Madaxweynaha maamulka Jubba ayaa ugu baaqay hay?adaha gargaarka in ay gobolka yimaadaan oo ay bilaabaan ka shaqaynta adeegyada muhiimka ah, waxaa uu mahad u celiyey hay?ada ICRC oo la wareegtay gacan ku haynta Cisbitalka Kismaayo
Baahin: Isniin, 7 Oct 2013, Caawa Iyo Daljir Weriye Iimaan Maxamed Jaamac ~ Daljir ~ Gaalkacyo